Maraykanka oon ku qanacsanayn heshiiska ganacsiga ee uu kula jiro K/Koonfureed - BBC News Somali
Maraykanka oon ku qanacsanayn heshiiska ganacsiga ee uu kula jiro K/Koonfureed
Image caption Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa booqday Washington
Dawladda Maraykanka ayaa Kuuriyada Koonfureed u sheegtay in ay doonayso in ay dib ugala xaajooto heshiiskii ganacsiga xorta ahaa ee ay wada galeen 2012kii, kaas oo ay ku tilmaameen ganacsi hal dhinac u janjeera.
Waa tallaabadii u dambaysay ee siyaasadda uu madaxweyne Trump ku difaacayo ganacsiga Maraykanka.
Wuxuu rabaa in la badalo heshiiska ganacsiga xorta ah ee dalalka Waqooyiga Ameerika oo loo soo gaabiyo NAFTA, wuxuu sidoo kale ku hanjabay in uu kharashaad dheeri ah saari alaabada ay ajaaniibtu u soo iibgeeyaan oo ay ka mid yihiin biruhu.
Maraykanku waxaa kale oo uu ka baxay bishii Janaayo heshiiska TPP oo ay ku midaysan yihiin 12 dal.
Kuuriyada Koonfureed ayaa ah dal xiriir ganacsi oo wayn la leh Maraykanka, iyagoo is waydaarsaday sannadkii hore ganacsi iyo adeegyo kale oo qiimahooda lagu qiyaasay 144.6 bilyan oo doolar.
Maamulkii Obma ayaa heshiiska ganacsiga xorta ah ee 2012kii ku tilmaamay wakhtigaas midkii ugu mihiimsanaa muddo 16 sano ah - uuna sare u qaadi doono ganacsiga.
Laakiin alaabada uu Maraykanku u dhoofiyo Kuuriyada Koonfureed ayaa hoos u dhacay ku dhawaad 3% tan iyo markii uu heshiiskaasi dhaqan galay, alaabada Kuuriyada Koonfureed laga soo dhoofiyana waxay sare u kacday 23".